अरु जिल्ला भन्दा काठमाडौमा बढ्यो कोरोनाको जोखिम, मन्त्रालयले गर्यो यस्तो आग्रह – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/अरु जिल्ला भन्दा काठमाडौमा बढ्यो कोरोनाको जोखिम, मन्त्रालयले गर्यो यस्तो आग्रह
Corona (COVID-19) UpdatesLockdown News
काठमाडौं, २२ असार । पछिल्लो केही दिन यता काठमाडौंमा थपिदै गएको नयँ कोरोना संक्रमितको संख्याले अब कोरोनाका लागि काठमाडौं सबैभन्दा बढी जोखिममा देखिएको छ । लकडाउन खुकुलो हुँदै जानु र काठमाडौंमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जानुले स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत चिन्तित बनाएको छ ।
काठमाडौंमा समुदाय स्तरमै कोरोना फैलिएको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरतहरुले सचेत गराएका छन् । काठमाडौंको ढलमा कोरोनाको जिवाणु देखिनुले समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको संकेत गर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले बताएका छन् । आइतवारमात्र काठमाडौंमा २७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । त्यस्तै ललितपुरमा दुई र भक्तपुरमा एक जनामा कोरोना देखियो।
बिहीवार पनि काठमाडौंमा २८ जना कोरोना संक्रमित देखिएका थिए । बिहिवार भक्तपुर र ललितपुर गरी ३२ जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। असार महिना लागे यता काठमाडौंमा कोरोना संक्रमितको संख्या दोहोरो अंकमा बढ्न थालेको हो । सुरुको दुई महिना एक अंकमा मात्र देखिएको संक्रमितको संख्या केही दिन यता दोहोरो अंकमा देखिएपछि चिन्ता थपिएको हो ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र छिर्ने नाकामा कडाई गरिएको छ। आन्तरिक र बाह्य हवाई उडानहरु पनि बन्द भएको अवस्थ्थामा संक्रमितको संख्या बढ्नुले शंका उब्जाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतम पछिल्लो केही दिन यता काठमाडौंमा देखिएका अधिकांश संक्रमित विदेशबाट आएको दाबी गरेका छन् । उनले भिडभाडमा जाँदा सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले पनि नेपालमा संक्रमित देखिएका ६४ प्रतिशत संक्रमित वाहिरवाट आएको दावी गरेका छन् । डा गौतमले काठमाडौंमा देखिएका मध्य ७५ प्रतिशत वाहिरवाट आएको दावी गरेका छन् ।
विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने क्रम संगै काठमाडौंमा संक्रमितको संख्या थपिएको हो । युएई, इजरायल, कुवेत, कतार, साउदी अरेबिया, जापान, बेलायत अमेरिकालगायत मुलुकबाट नेपालीहरु फर्किरहेका छन्। यसरी फर्किएका मानिसलाई होटल तथा होल्डिङ सेन्टरमा राखेर सम्बन्धित जिल्लामा पुर्‍याइरहेको छ। काठमाडौंमा महानगरपालिकामा कोरोना देखिएका अधिकांश मानिस पनि यसरी नै विदेशबाट आएको महानगरपालिकाले जानकरी दिएको छ।
घना वस्ती भएको काठमाडौंमा यसरी कोरोना संक्रमितको संख्या थपिएको अवस्थामा डा गौतमले अन्य जिल्लामा भन्दा अब काठमाडौंमा कोरोनाको जोखिम बढेको बताएका छन् । भिडभाड धेरै हुने भएकाले छिट्टै फैलन सक्ने भएकाले सचेत रहन डा गौतमले आग्रह गरेका हुन् ।
शंखरापुर नगरपालिकामा आज बाट फ्रन्ट लाइनमा सक्रिय व्यक्तिहरुको RDT/PCR परिक्षण हुदै !!
भारतबाट करिब ८० हजार मान्छे नेपाल आउने तयारीमा ! पुरा पढ्नुहोस
साउदीमा २४ सै घण्टा कर्फ्यू, सतर्क रहन नेपालीलाई दूतावासको आह्वान !
कोरोना संक्र`मितको संख्या` ह्वा`त्तै बढे पछि भर्ख`रै सरका रको यस्तो घोष`णा, २७३ जनामा कोरोना पु`ष्टि…..(भिडि`यो सहि`त)
सरकारद्वारा देशव्यापी निषेधाज्ञा घोषणा !